स्वास्थ – Page2– Nepali Ko Online
पाकिस्तानी राजदूतद्धारा भरतपुर आँखा अस्पतालको नवनिमित भवन उद्घाटन २५ कार्तिक २०७४, शनिबार २०:३१
काठमाडौँ, २५ कात्तिक । भरतपुर आँखा अस्पतालमा निर्माण भएको चस्मा औषधि एवं रजिष्ट्रेशन भवन आजबाट सञ्चालनमा आएको छ । नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत डा. मजहर जावेदले आज एक कार्यक्रमका बीच नव निर्मित भवनको उद्घान गरेपछि सञ्चालनमा आएको हो । नेपाल..
अचम्मैको रोग – जुन यौन सम्पर्क गरेपछि तुरुन्तै ठिक हुन्छ २० कार्तिक २०७४, सोमबार ०९:२१
एजेन्सी,२० कात्तिक । वैज्ञानिकहरुले यौनसम्पर्क गर्दा टाउकोको दुखाई तुरुन्तै ठिक हुने नयाँ तथ्य पत्ता लगाएका छन् । उनीहरुले सेक्सलाई टाउको दुखाईको अचूक औषधि भनेका छन् । आमरुपमा सेक्सबाट यति सुख मिल्छ कि शरीर र मनको थकान मेटाउछ । कसैको नजिक..
जिल्ला अस्पताल, खोटाङमा दन्त सेवा शुरु १५ कार्तिक २०७४, बुधबार ०९:४४
खोटाङ, १५ कात्तिक । जिल्ला अस्पताल खोटाङमा दन्त सेवा शुरु गरिएको छ । दन्त विशेषज्ञ एञ्जिला श्रेष्ठलाई करारमा ल्याएर अस्पतालमा पहिलो पटक दन्त सेवा शुरु गरिएको हो । अस्पताल स्थापना भएको २६ वर्षपछि अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको दन्त सेवा थालिएको..
मोटो मानिसमा हुन सक्छ यी रोगको खतरा ६ कार्तिक २०७४, सोमबार १६:४२
काठमाडौं, ६ कात्तिक । मोटोपन अथवा ओभर वेट हुनु खुसी र सुखको कारण सोच्नुभएको छ भने अब त्यस्तो भ्रमबाट बाहिर निस्कनुहोस् । बढी मोटोपन केही गम्भीर बिमारीको कारण पनि हुन सक्छ । हार्वर्ड स्कुल अफ पब्लिक हेल्थको अध्ययनअनुसार मोटो मानिस धेरै प्रकारका..
बच्चा जन्माउने योजनामा हुनुहुन्छ ?
तपाईंहरू जोकोही पनि बच्चा जन्माउँदै हुनुहुन्छ भने पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । पूर्वतयारीविना गर्भ बसेको खण्डमा केही समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले सामान्य कुराहरूको जानकारी लिएर मात्रै बच्चा जन्माउने हो भने तपाईं र शिशुको स्वास्थ्य राम्रो..
शरीरलाई नभई नहुने पोषक तत्वमा पर्छ प्रोटिन । अङ्ग, मांसपेशी, स्नायु प्रणाली तथा प्रतिरक्षा प्रणाली धेरै हदसम्म प्रोटिनमा भर पर्छन् । शरीरको संरचना विकासमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मांसपेशीको विकास तथा आन्तरिक स्वस्थताले शरीरको ढाँचा..